Shiinaha Warshad Toogasho Yar oo Kaarboon-yar ah iyo soosaarayaasha | TAA
Xoojin sare, adkeysi sare, nolol adeeg dheer.
Burburka hoose, boodhka oo hooseeya, wasakhda oo yar.
Xirmo yar oo qalab ah, nolol dheer oo siyaado ah.
Iska yaree culeyska nidaamka wasakhda, sii dheeree waqtiga isticmaalka qalabka kala-bixinta
Waxyaabaha kale ee daawaha ah
Ku darista Cr Mo Ni B Al Cu iwm.
Qaab dhismeedka Duplex oo la isku daray Martensite iyo Bainite
Shaashadda Lambar Inji Cabbirka shaashadda S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930
6 0.132 3.35 Dhammaan way dhaafaan
7 0.111 2.80 Dhammaan way dhaafaan
8 0.0937 2.36 Dhammaan way dhaafaan ≥90%
10 0.0787 2.00 Dhammaan way dhaafaan Dhammaan way dhaafaan ≥85% ≥97%
12 0.0661 1.70 Dhammaan way dhaafaan ≤5% ≥85% ≥97%
14 0.0555 1.40 Dhammaan way dhaafaan ≤5% ≥85% ≥97%
16 0.0469 1.18 Dhammaan way dhaafaan ≤5% ≥85% ≥97%
18 0.0394 1.00 Dhammaan way dhaafaan ≤5% ≥85% ≥96%
20 0.0331 0.850 Dhammaan way dhaafaan ≤10% ≥85% ≥96%
30 0.0232 0.600 Dhammaan way dhaafaan ≥85% ≥96%
40 0.0165 0.425 Dhamaan Gudbinta ≥85%
Tijaabada Nolosha Daalka
Jaantuska Isticmaalka Sawirka TAA Toogashada birta LCB, shot steel-carbon-yar iyo tallaalka biraha-kaarboon-sare. (tijaabinta nolosha daalka ee fasalada caadiga ah ee saamiga xawaaraha saamaynta ku leh 60.96m / s)
Isticmaalka isbarbar dhiga-Fasalka Caadiga ah
Imtixaanka nolosha daalka waxaan ku arki karnaa taas: nolosha adeegga ee TAA LCB steel toogtay waa 1.5 jeer ka dheer yahay tallaalka birta kaarboon yar ee caadiga ah, 2 jeer ayuu ka dheer yahay tallaalka birta kaarboon sare leh.
Nadiifinta Qarxa: Waxaa loo isticmaalaa nadiifinta qaraxa ee shubista, dhimista-shubka, been abuurka; ka qaadista ciidda shubka, saxanka birta, birta nooca H, qaab dhismeedka birta.
Ka saarida miridhku: Ka qaadista miridhku shubista, foojignaanta, saxanka birta, birta nooca H, qaab dhismeedka birta.
Fiiqa toogashada: fiiqitaanka toogashada qalabka, qaybaha kuleylka lagu daaweeyo.
Qarxitaanka Ciida: Ciida ciida ee biraha macdanta, guddiga markabka, guddiga birta, qalabka birta, qaab dhismeedka birta.
Daaweynta ka hor: Daaweynta ka hor ee dusha, guddiga birta, steel profile, qaab dhismeedka steel, ka hor rinjiyeynta ama daahan.
Hore: Dahaarka birta ahama
Xiga: Silig Aluminium gooyay
Daawaha Low Carbon Shot
Qarxaya Carbon-biraha Carbon-hooseeya
Toogashada Birta Yar ee Ferrosad
Rasaas Nadiif ah oo Kaarboon Bainite ah
Shot steel Carbon Low Waayo Peening
Soo-saaraha Toogashooyinka Birta-yar
Shot steel Carbon-yar S110
Shot steel Carbon hoose S170
Shot steel Carbon Hoose S230
Shot steel Carbon Hoose S280
Shot steel Carbon Hoose S330
Rasaas-Bireedka Kaarboon-yar ee S390
Shot steel Carbon-yar S460
Shot steel Carbon Hoose S550
Rasaas-Bireedka Kaarboon-yar ee S660
Shot steel Carbon Hoose S70
Shot steel Carbon Hoose S780
Toogashooyinka Birta Kaarboon-yar
S110 Rasaas Kaarboon Yar
Toogashada Carbon ee Carbon ee Tocelik Low
Waxaan ku sameynay horumar weyn xagga maaddada iyo farsamooyinka ku saleysan habka wax soo saarka soo jireenka ah. Ka faa'iideysiga silig birta daawaha ah oo tayo sare leh sida substrate-ka sare u qaada astaamaha farsamada oo ka dhiga mid deggan. Hagaajinta farsamada fidinta taas oo ka dhigaysa ururka gudaha mid aad u cufan. Hagaajinta hannaanka foojignaanta dhaqanka ee gebi ahaanba ku tiirsan saameynta si loo yareeyo dhaawaca inta uu jiro blastin ...
Aluminium tallaalka siligga ah ee loo yaqaan 'aluminium' ayaa sidoo kale loogu magac daray aluminium biimeed, kuul aluminium, dhagaxyada aluminium, pellet aluminium. Waxaa laga sameeyaa silig aluminium ah oo tayo sare leh, muuqaalku waa mid dhalaalaya, waa warbaahin ku habboon nadiifinta iyo xoojinta dusha sare ee qaybaha biraha aan fiicnayn Waxaa badanaa laga codsadaa daaweynta dusha sare ee aluminium, alaabada Zinc ama qaybo shaqo oo leh gidaar khafiif ah mashiinka qarxa. Alaabada Macluumaadka Tech Tech Alum ...